केटाहरु ३० देखि ३५ मिनेट गरेपछि थाक्छन् तर केटीहरु पुगेन भाछैन् भन्छन्, हेर्नुहोस् केटीहरुले मात्तिदै गरेको यो रमाइलो कुराकानी भिडियोमा – Wow Sansar
काठमाडौँ । केटाहरु ३० देखि ३५ मिनेट गरेपछि थाक्छन् तर केटीहरु पुगेन भाछैन् भन्छन्, हेर्नुहोस् केटीहरुले मात्तिदै गरेको यो रमाइलो कुराकानी भिडियोमा । जुन कुराकानीले केटाकेटीहरु सबै पानीपानी हुनेछन् । हेनुृहोस् मनोरञ्जनलेल भरिएको यो भिडियो
बिहे गरेको एक बर्ष सम्म पनि कुनै पनि अस्थिाई साधनको प्रयोग बिना शारिरक स*म्पर्क गर्दा बच्चा बसेन भने बाँझो पना हुने डा. सिम्खडा बताउँछिन् । उमेर जति बढ्दै गयो उत्तिकै बाझोपना हुने संभावना हुन्छ । उमेरको हकमा ३० बर्ष माथि अझ बढी जोखिम हुने संभावना रहन्छ । दैनिक जस्तो शारिरिक सम्पर्क गर्दा वा महिनावारी भएको १० दे खी २० दिन भित्र सम्पर्क हुँदा पनि बच्चा बसेन भने तुरन्त सम्बन्धीत चिकित्सकलाई देखाउन उनी आग्रह गर्छिन् ।
पहिले नेपालका बिरामीहरु भारत जान्थे तर अहिले भार तबाट बाझोपनाको उपचार गर्न नेपाल आउने गरेको डा. सबिनाको अनुभव छ । उनको क्लिनिकमा पनि धेरै भार तीयहरु आएर सेवा लिएका छन् । हामीले उनी प्रजनन् बिशेषज्ञ डा. सबिना सिम्खडासंग बाँझोपना र प्रजननको बिषयमा कुराकानी गरेका छौं । हेरौ यो कुराकानी..***
Prevमलेसियामा ज्यान गुमाएका श्रमिकको शव नेपाल एयरलाइन्स मलेसिया जाँदै
Nextभुलेर पनि कहिले नगर्नुहोस् यस्ता काम जसले भित्र्याउँछ घरमा गरिबी
निर्मलाको ज्या.न लि.ने अ.पराधीको बारेमा यस्तो सूचना प्रहरीलाई आएपछि… (2756)